Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:56 PM 17 comments:
သူ့ အတွက်လို သတ်မှတ်ပြီးနောက်
photo credit. google
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 1:51 PM 11 comments:
Rüsselsheim ရဲ့ နိဗ္ဗာန်( သို့) အထီးကျန် မင်းသမီးလေးရဲ့ ရဲတိုက် ° ° ° ° ° °
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပေါ့.. အလွန်လှပတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီး တစ်ခုထဲမှ ရဲတိုက်ကြီး တစ်ခု တည်ဆောက်ထားပြီး အဲ့ဒီ ရဲတိုက်ထဲ မှာတော့ အရမ်းကို ချောမော လှပတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ဦး နေထိုင်ခဲ့ဖူး သတဲ့ကွယ်...။
မင်းသမီးလေးက နန်းတော်ထဲမှာ မနေပဲ ဘာလို့ ရဲတိုက်ကြီး ထဲမှာ နေရတာလဲ..?
ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေခဲ့ပြီး သူ ဘာဖြစ်လို့ သေဆုံးသွားတာလဲ..?
ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ ထိုရဲတိုက်ကြီးကရော တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပျက်စီးသွားခဲ့တာလဲ...?
မေးခွန်းတွေ အများကြီးက ခေါင်းထဲမှာ အပြည့်ပါ.. သိချင်စိတ် ပြင်းထန်နေပေမယ့် သူ့အကြောင်း လေ့လာဖို့ အချိန် မလောက်ငှခဲ့ပြန်ဘူး..။
သိချင်ရင် ပြတိုက်မှာ သွားဖတ်မှ ရမယ်.. ဒီမှာတော့ ဘာမှ ရေးမထားဘူး ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်လျော့လိုက်ရတယ်။
မကျေမနပ်ဖြစ်မိပေမယ့်လဲ ဒီရဲတိုက်ကို မြင်ရခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ ပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်တော့တယ်..။
ခုချိန်မှာတော့ ပန်းခြံတစ်ခု အဖြစ် လူတွေ အပန်းဖြေ သွားလာ နေကြပါတယ်..။
သိပ်ကြီးမကြီးပေမယ့် သိပ်လဲ မသေးတဲ့ ပန်းခြံလေး တစ်ခုပါ..။
အရင်ကတော့ မင်းသမီးလေး နေခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်လေးပေါ့နော်..။
Rüsselsheim ဆိုတဲ့ မြို့လေးက Frankfurt ကနေ အနည်းငယ်ကျော်သွားရတဲ့ မြို့လေးတစ်ခုပါ။
Frankfurt air port ကနေ သုံးမှတ်တိုင်လောက် ရထားစီးပြီး သွားရင်ရောက်ပါတယ်..။
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း( ထိုင်းမလေး ) နဲ့ သူ့မိသားစု နေတဲ့ ထိုမြို့လေးကို မရောက်တာ ကြာတာနဲ့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းမှာ ကန်ဘောင်ဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းက တဆင့် ထိုဥယျာဉ်လေးကို ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ အရင်က တစ်ခါမှ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ ဥယျာဉ်က ရဲတိုက်ကြီး တည်ရှိနေရာ Rüsselsheim Verna ဥယျာဉ်ပါတဲ့..။
ဥယျာဉ်ထဲက ရဲတိုက်ရဲ့ ဘေးဘက်ခြမ်း
မြို့ရဲ့ ပုံကို ပန်းချီဆွဲထားတာပါ နှစ်တွေ ကြာလို့ ဘာမှ မထင်ရှားတော့ပါဘူး..
ဒါက Verna ရဲတိုက်.. ညနေပိုင်းရောက်သွားတာမို့ ပိုလို့ တောင် အထီးကျန်ဆန်နေတယ်..
ဒါက Verna ရဲတိုက်..( ဒီတစ်ပုံက အင်တာနက် က ယူထားတာပါ သေချာကြည့်လို့ရအောင်)
အဆောင် ကူးတဲ့ တံတား..
ညာဘက်က တံခါးဝ ..တစ်ချို့တစ်ဝက် ပျက်နေပြီ
အပေါ်ဆုံးက တစ်ခုထဲသော ပြတင်း
ဒါက ဥယျာဉ် အလည်နားက နေနာရီ သွားတဲ့အချိန်က ညနေဆိုတော့ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး..
( နာရီတခါ ကြည့်ဖို့ အဝေးကြီး လာရမှားp )
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာက လျှော့မသွားလို့..အင်တာနက်ထဲမွှေနှောက်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ Verna Park အကြောင်း တွေ့လိုက်ရတယ်..။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီဥယျာဉ်လေး ထဲ ဘယ်မင်းသမီးလေး မနေခဲ့ပါဘူး..နေခဲ့ သယောင်ယောင် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ပန်းခြံတစ်ခု သက်သက်ပါပဲ..။
ပိုင်ရှင်ကတော့ Verna Family ပါ..။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီဥယျာဉ်ကို Verna Park လို့ အမည်တွင်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.။ ၁၈၅၀-၁၈၆၅ ခုနှစ်အထိ တည်ဆောင်ခဲ့ပြီး တော့ ၁၉၁၁ မှာ Rüsselheim မြို့ကို ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပြီး ၁၉၁၂ မှာတော့ လူထု ပန်းခြံအဖြစ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်..။ အဲ့ဒီပန်းခြံ ရဲ့ ကျော်ကြားရခြင်း အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကတော့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ ကျော်ကို မူရင်း တည်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီလို ပါးစပ်ရာဇင်ဝင် ပုံပြင်တွေ ရှိနေခဲ့ ပြီး ထင်ရောင် ထင်မှား ဖြစ်စဖွယ် စိတ်ကူးယဉ် ပန်းခြံလေး တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်..။ သူ့ကို တနည်းအားဖြင့် Rüsselsheim ရဲ့ နိဗ္ဗာန် လို့လဲ ခေါ်ကြပါသေးတယ်..။
( ပုံတွေကတော့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် အဓိက က ရဲတိုက်ကိုပြောချင်တာ ဆိုတော့ သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပုံတွေပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဗဟုသုတပေါ့ )
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 3:13 PM2comments:
Labels: ဓါတ်ပုံ, ဗဟုသုတ, သွားရင်းလာရင်း
ကမ္ဘာရဲ့ ဟိုဘက်တခြမ်းမှာ နေပူနေပြီး
တစ်ခုထဲသာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတောင် မရေတွက်နိုင်တဲ့ မတူညီခြင်းတွေ များပြားလွန်းနေတယ်။
မဆိုင်တဲ့သူတွေချည်းပဲ အတူနေနေ ကြတဲ့ ကမ္ဘာမြေလေ..။
ဟိုဟို တွေ ဒီဒီတွေ လျှောက်အော်လည်း မထူးပါဘူး..
အကုန်လုံးက အတ္တကို အပိုင်လိုချင် သူတွေချည်းပါပဲ..။
သူတပါး ရဲ့ အားနည်းချက်လဲ ထည့်မတွက်တက်ဘူး..
ပါးစပ် ထွက်သမျှ ပြောပစ်ဖို့ ဝန်မလေးကျတာများ..။
ကိုယ်တိုင်လဲ တခါတလေတော့ လူမဆန်ချင်လာတယ်...။
ပြန်လည် မတုန့်ပြန်ကြေးဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုနဲ့..
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ဓါးနဲ့ မွှန်းမွှန်းချနေတာ
အော် ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာများ ရှိမယ်ဆိုရင်လေ
မသိသူတွေကို သိအောင်လဲ မပြောပြချင်တော့ဘူး
ကိုယ်ခံစားရသမျှ စာအဖြစ်သာ စီချမယ်...။
အချစ် အချစ်ရယ်လဲ မအော်ချင်တော့ဘူး..။
ဟိုဘက်နား နဲနဲ ခြင်းရွေ့သွားမယ် ဆိုရင်ပဲ
ခရီးတော့ နဲနဲ ပေါက်နိုင်ပါတယ်..လေ။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:39 PM6comments:
Nail Art With Fruits..... ^^ _ ^^
Hi hi..;p !!!!!!
ဘယ်လိုလဲ အိမ်မက်ကို မေ့ကုန်ကြပြီ ထင်တယ်..မတွေ့တာလဲ ကြာပြီဆိုတော့..
တော်တော် စိတ်အနှောင့် အယှက်ပေးနိုင်လွန်းတဲ့ Facebook ကြီးကို ပိတ်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာ ဖွင့်တာနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..။ အော် Facebook Facebook....
သူ့ကို စွဲလန်းနေတာနဲ့ပဲ blog လေးတောင် ပြစ်ထားမိတာ တော်တော် ကြာပြီပဲ နော်...။
ခုတလော အိမ်မက် တစ်ယောက်လဲ ဟိုသင်္ကြန်ပြေးလိုက် ဒီသင်္ကြန်ပြေးလိုက်နဲ့ frankfurt မှာ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်နေတာများ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်တောင် ကြည့်မရဘူး.။
ဘယ်လိုမှ မတည့်နိုင်တဲ့ အသံနဲ့လဲ သီချင်းလေး ဘာလေး ပြေးဆိုလိုက်သေး..။
ပွဲဆိုတော့လဲ အလှလေး ဘာလေး ပြင် တယ်ပေါ့လေ..။
ဒီမှာက လက်သည်း ပြင်ရင် . အလှဆိုးရင် သိပ်ဈေးကြီးတော့ ဆိုင်မှာ ဘယ်တော့မှ မပြင်ဖြစ်ဖူးလေ.။
အိမ်မှာ ပဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းကို စိတ်ကူးပေါက်သလို လုပ်ဖြစ်တာ များတယ်..။
ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေး မမတို့ ညလေးတို့ကို ပြောချင်စိတ်လေး ပေါ်လာလို့..။
လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ် လွန်းလို့ ရှင်းပြစရာကို မလိုဘူး ထင်တယ်။
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိမယ် ထင်တယ်နော်..။ ကြည့် ကြည့်ပါဦး...။
အောက်က သုံးဖြစ်တဲ့ လက်သည်းနီ အရောင်...
အဲ့ဒီ အရောင်လေးကို အောက်ခံ ဆိုးပြီး ..အောက်ပုံထဲက လုပ်ပြီးသားသစ်သီးပုံ လေးတွေကို မခြောက်တခြောက်မှာ ကပ်လိုက်..ပြီးရင် အပေါ်က နောက်တစ်ထပ် ထပ်ဆိုးလိုက် ဆို..ပြီးသွားပြီ..။
ဘယ်လိုလဲ လွယ်တယ် မဟုတ်လား..။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 4:26 PM4comments:
Labels: ဓါတ်ပုံ, ကြေငြာ
ဆူရှီ ကြိုက်ကြလား ?? ဆူရှီ ဆိုရင် အသားစိမ်း ၊ အထူးသဖြင့် ငါးအစိမ်းနဲ့ လို့ သိထားကြတယ်။ ဆူရှီ ကို ကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လို ငါးအစိမ်းတွေတော့ မစားချင်ဘူး..။ ဆူရှီ ထမင်းကို တော့ အရမ်းကြိုက်တယ်.။ဝယ်စားရင် အပေါ်က ငါး အစိမ်း တွေ ဖယ်ပြီး ထမင်းနဲ့ အရွက်တွေပဲ ရွေးစားဖြစ်တယ်..နောက်တော့ ဆှိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို သွားတွေ့တယ်..မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်လဲ ရှိတယ်..သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာဆိုတော့ စားချင်တာလေး ကောင်းတာလေးတွေ သူက ပြောပြတက်တယ်.။ ဒါနဲ့ မကြာမကြာ သွားစားဖြစ်တယ်..အမြင်လဲလှပြီး ငါးအစိမ်းတွေမပါတဲ့ ဆူရှီပါ..။ sauce ကလဲ အရမ်းစားကောင်းပြီး စားပြီးရင်းကို ထပ်စားချင်နေတော့တာ..လေ။ ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်..။ ကြည့်မိလို့ စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂျာမနီကို တစ်ခါ တစ်ခေါက်လောက် အရောက်လာခဲ့ပါ လိုက်ကျွေးပါ့မယ်လို့..။ အော် နဲနဲလေးမို့ မဝဘူးလို့ မထင်လိုက်နဲ့နော်..ထမင်းပါတာမို့ အစားမကြီးတဲ့ သူဆိုရင်တော့ တကယ်ပဲ ဗိုက်ပြည့်ပါတယ်..။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:53 AM4comments:
Labels: သွားရင်းလာရင်း, ကြေငြာ
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 8:33 AM4comments: